Fitaovana fandroana 4 inch Chrome
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana finday / WOWOW 4 Inch Centerset Fitaovana fandroana tokana ao Chrome
Fametrahana mora: ity fantsom-pandroahana fandroana ity dia natao hifanaraka amin'ny lavaka 3, 4-in. Fifanarahana Centerset
Tafiditra ao anaty fivoriambe: ny fivorian'ny pop-up amin'ny faran'ny fandrindrana dia ampidirina mora foana mba hamita ny bika aman'endrinao.
2320700C torolàlana fametrahana
Fitao fandroana Chrome 2320700C
Ny faucet ao amin'ny efitrano fandroana chrome vita amin'ny WOWOW dia manolotra endrika mamirapiratra ho an'ny fandroanao. Ity fantsom-baravarankely chrome ity dia manana endrika lamaody Retro mahazatra. Hisy fiatraikany lehibe amin'ny haingon-trano fidianao, amin'izay karazana trano onenananao. Ity fantsom-pandroana chrome ity dia azo apetraka ao amin'ny trano fanofana, condo vaovao, trano tokana, trano misy motera, bungalow, tranofiara fitetezana na trano lehibe. Ny faucet fandroana chrome mitaingina tokotanin-tsambo dia misy faran'ny chrome toy ny fitaratra izay manome topy maso ny ankamaroan'ny trano fandroana. Ny famaranana Chrome dia hita taratra tokoa hanomezana endrika manjelanjelatra izay mifangaro tsara amin'ny fomba fandroana rehetra. Miaraka amin'ireo fiolahana mikoriana dia manampy fikitika mahazatra sy ankehitriny ao amin'ny trano fidianao.
Ny faucet fandroana chrome tokana dia manolotra fomba mora hanetsehana ny famerenana miverina sy miverina ary miakatra sy midina milamina. Amin'izany no ahafahanao mifehy ny haavon'ny rano sy ny maripana amin'ny tanana iray monja. Manamora ny fanitsiana kely ny rano mikoriana araka ny filanao manokana. Ho gaga ianao amin'ny fahamoran'ny fifehezana ny rano.
Fitaovana fandroana chrome fampiasa amin'ny kalitao avo lenta
Ny faucet fandroana chrome an'ny WOWOW dia novokarina tamin'ny firaka zinc, ary nofaranana tamin'ny chrome voaravaka sy voaravaka tarehy. WOWOW dia mampiasa teknolojia manara-penitra mba hiantohana ny hatsarana sy ny faharetana maharitra mandrakizay. Ny valizy vita amin'ny seramika ohatra dia manome fampisehoana tsy mitete hitodika tsara. Ny cartridge vita amin'ny seramika avo lenta kosa dia nandalo fitsapana niaraka tamin'ny tsingerin'ny rano maherin'ny 500,000. Ary mbola nanao tsara ihany ny fantsom-pandroana chrome taorian'ny fitsapana rehetra ireo. WOWOW noho izany dia mihoatra ny fenitra lava rehetra lava amin'ny indostrian'ny faharetana.
Ankoatry ny faharetana, tsara ihany koa ny fahalalana fa manana rano madio sy madio amin'ny fotoana rehetra. Noho ny metaly goavambe izay ampiasaina dia hiaina rano tsy misy firaka ianao amin'ny fotoana rehetra. Hiaro ny fahasalamanao sy ny fianakavianao mandrakizay izany. Ny fanavaozana ny fantsom-pandroana chrome an'ny WOWOW noho izany dia tsy ho endri-javatra mahafinaritra ho an'ny trano fidianao, fa safidy ara-pahasalamana ihany koa!
Fitaovana fandroana chrome centerset
Ny faucet fandroana chrome centres dia afaka apetrakao mora foana. Ity fantsom-pandroana chrome fandroana chrome ity dia vonona amin'ny fametrahana centres 4-lavaka 3-lavaka. Ny elanelana misy eo amin'ny faucet sy ny tahony dia 4 santimetatra. Miaraka amin'ny kojakoja rehetra sy ny kojakoja fanaovana fivoriambe, ity faucets ao amin'ny efitrano fandroana Chrome ity dia vonona hametaka azy io. Ity fametrahana DIY ity dia hamonjy anao amin'ny vidin'ny plumber lafo. Ary tsy ilaina mihitsy izany. Ny famolavolana manavao azy io dia ahafahan'ny olona vao manomboka mametraka ity fantsom-pandroana chrome ity ao anatin'ny 20 minitra fotsiny. Ny fonosana fametrahana aza dia misy fonon-tànana fametrahana fanampiny. Amin'izany fomba izany dia tsy hanimba ny tananao tampoka ianao rehefa mametraka ny faucet fandroana chrome. Fantaro azafady fa ny tsipika famatsiana dia tsy tafiditra raha mila azy ireo ianao, ary amidy samy hafa izy ireo.
Ny haavon'ny spout an'ny fauxet chrome WOWOW dia 2.7 santimetatra ary 4.2 santimetatra ny tratran'ny spout. Ny paompy fandroana tokana dia mifanaraka amin'ny fametrahana 4-inch mahazatra. Ankoatr'izay, ny faucet fandroana chrome mahazatra dia miaraka amina tampon-kavo iray misy tsorakazo fampakarana tafiditra. Ny faucet fandroana chrome dia mifangaro tsara amin'ny fivorian'ny solika chrome. Izy io dia mamorona firaisankina mirindra ao amin'ny fitoeram-pidianao. Azonao atao ny mamela ny rano hiala amin'ny trano fandroana mora foana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny tehina fananganana. Ny fahamoran'ny fikirakirana ny tehina dia manakana anao tsy handratra ny tananao raha manasa azy ianao. Ny famolavolana ny tehina dia namboarina mba hanadio sy hanamora ny fiainanao.
Fitaovana fandroana chrome ara-toekarena
Ny aerator ABS manavao dia mamonjy rano 50% mahery. Izy io dia mifehy ny renirano amin'ny alàlan'ny fanomezana tsindry mifanohitra ny renirano. Izany dia mitarika any amin'ny renirano manohitra ny famafazana, ary mamonjy anao amin'ny trosanao. Miankina amin'ny toerana misy anao, afaka miakatra mora foana ny faktioran-drano anao. Noho izany dia tsara ny mahafantatra fa afaka mitsitsy vola amin'ny rano ianao, nefa tsy very ny fahombiazany. Tsy ho hitanao akory ny mahasamihafa azy satria hanatsara ny fiainanao ny rano noho ny endrika fanoherana ny splatter.
Ny aeratorie Neoperl avo lenta dia manome anao traikefa fanasana milamina. Amin'ny fikasihan-tanana malefaka amin'ny rantsan-tànanao, dia azonao atao ny manala ny sisan'ny rano mafy toy ny calcium. Amin'izany dia azonao atao ny mitazona ny faucet ao amin'ny efitrano fandroana Chrome ho vaovao sy mahomby amin'ny fomba tsara. Ny aerator ny faucet fandroana Chrome dia azo esorina mora foana amin'ny tananao ihany koa. Tsy mila fitaovana akory ianao hanalana ny aerator satria azonao esorina fotsiny ity fisehoan-javatra vaovao ity. Azonao esorina ny aerator na manadio na manolo azy.
Fitao fandroana chrome tsy misy risika
Miaraka amin'ny fe-potoam-piantohana 3 taona azy, WOWOW dia mampiseho ny fahatokisany ny faucet fandroana chrome. Miaraka amin'ity faucet fandroana chrome avo lenta ity dia manana ny sandam-bola tsara indrindra azonao atao ianao eny an-tsena. Ireo fitaovana avo lenta dia tsy misy fanamby, ary amin'ny resaka vola ampiasana vola dia ambany ny vidiny araka izay azony. Vokatr'izany, WOWOW dia manome antoka fa tsy hahita faucet fandroana tsara kalitao ianao amin'ny vidiny mitovy. Tsy ho hitanao koa ity faucet fandroana fandroana kalitao ity amin'ny vidiny ambany. Noho ny kalitao avo lenta, WOWOW dia tsy matahotra manome anao fe-potoana fiantohana 3 taona. Ny faucet fandroana Chrome dia hosoloina marika vaovao avy hatrany raha simba noho ny antony sasany.
Azonao atao ny mividy faucet fandroana chrome an'i WOWOW fa tsy misy atahorana mihitsy. Mahazo antoka ara-bola 90 andro fanampiny ianao. Raha tsy ho afa-po 100% amin'ny faucet fidianao WOWOW ianao, dia hahazo famerenam-bola feno. Raha tsy misy fanontaniana apetraka dia toy izany ihany. Saingy matoky izahay fa tsy haverinao ny faucet-nao, satria manana mpanjifa afa-po sy miverina be erak'izao tontolo izao izahay. Azonay antoka fa ho resy lahatra ianao amin'ny sandan'ny vola atolotray anao.
Ny tombony azo avy amin'ny fandroana chrome fandroana amin'ny fomba fohy
• Famoronana chrome mamirapiratra
• Atao malefaka
• Miaraka amin'ny tsato-kazo fisintonana vaovao
• vita amin'ny akora firaka zinc avo lenta
SKU: 2320700C Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana finday Tags: 4 santimetatra, centerset, Fitondrana tokana
5.3 X 6 X 6.7 santimetatra
Firaka zinc / varahina / vy vy
Famolavolana centeret 3 lavaka 4 santimetatra
Valizy kapila vita amin'ny seramika NSF, mifangaro rano, 3-hole 4 in. Famolavolana centeret, mora apetraka, fifehezana 1 rano mafana sy mangatsiaka, chrome